Barre Hiiraale oo gacanseyray waanwaan ay ula tageen guddi odayaal & waxgarad ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kismaayo – Mareeg.com: Col. Barre Aadan Shire (Hiiraale) ayaa ku gacanseyray waan-waan ay ula tageen odayaal iyo waxgarad ku beel ah, kuwaasoo ka baxay magaalada Kismaayo.
Col. Barre Hiiraale oo wata maleeshiyo hubeysan oo ku beel ah ayaa ku sugan deegaanka Goobweyn oo ka baxsan magaalada Kismaayo kadib markii sanadkii hore dagaal looga saaray magaalada.
Guddi ka kooban odayaal iyo waxgarad ku hayb ah Barre Aadan Shirre ayaa shalay kulan kula qaatay deegaanka Goobweyn ee duleedka magaalada Kismaayo, hase ahaatee waxaa guddogaas la laabtay natiijo la’aan.
Guddiga ka tegay Kismaayo iyo Barre Hiiraale ayaa isku mari waayey qodobo ay ka mid yihiin inuu hubka dhigo, arrinkaas oo dowladda Soomaaliya horay ugu jeedisay.
Barre Hiiraale ayaa odayaasha usheegay inuusan aqbalikarin inuu hubka dhigo, oo uu Axmed Madoobe isku dhiibo, isaga oo u cadeeyay inuu taasi ka xigo dagaal.
Wuxuu kaloo Barre odayaasha usheegay inuu dagaalamayo inta dadka Jubbooyinka ay ka helayaan ammaan buuxa iyo ku noolaanshaha nabada, sida uu yiri.
Barre Hiiraale ayaa horay u diiday qorshe uu isgaarsiinta ugu bandhigay Raysulwasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed oo ahaa inuu ciidamadiisa geeyo Kismaayo si ay uga mid noqdaan ciidanka maamulka Juba, islamarkaana isaga laga qaado gobolka Jubada Hoose.
Col. Barre Hiiraale ayaa waxaa loolan qabiil kala dhaxeeyaa hogaamiyaha maamulka Juba, Axmed Madoobe, iyadoo ku xigeenka Axmed Madoobe yahay nin ku beel ah Barre Hiiraale, laguna magacaabo Jen. Fartaag.
Akhri eedeymaha loo heysto gudoomiyihii hore ee Balcad oo laamaha amaanku raadinayaan